စာရင်းအင်း ပညာ သို့မဟုတ် စာရင်းအင်းသင်္ချာ (statistics) သည် သင်္ချာဘာသာ၏ ဘာသာကွဲတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် အချက်အလက်များ (data) ကို စုဆောင်းခြင်း (collection)၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဆန်းစစ်ခြင်း (analysis)၊ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ထုတ်ခြင်း (explanation) နှင် ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း (presentation) စသည့် ဖြစ်စဉ်များ ပါဝင်သည်။ ယင်းပညာရပ်ကို သဘာဝ နှင့် လူမှုရေး သိပ္ပံ မှသည် အစိုးရ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအထိ နယ်ပယ်များစွာတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရန်အတွက် စာရင်းအင်းသင်္ချာကို အသုံးချရာတွင် စိတ်ဝင်စားသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် လေ့လာကောက်ချက်ဆွဲမည့် အုပ်စုကြီးတစ်ခု ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ ရှေးမှကောက်ယူရရှိထားသော စာရင်းအင်းအချက်အလက်ကို အခြေခံယူ၍ ပြုလုပ်ထားသောပုံစံ (statistical model) ကို အသုံးပြုကာ နောက်ဖြစ်နိုင်ခြေကို လေ့လာကောက်ချက်ဆွဲခြင်းဖြစ်စေ ဤသို့စတင်တွေးတောခြင်းမှာ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဖြစ်သည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အုပ်စုကြီးတစ်ခု (population) ဆိုသည်မှာ "လူမျိုးပေါင်းစုံ" (သို့) "တိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်သောလူအားလုံး" (သို့) "ကျောက်သလင်း (cyrstal) တစ်ခုတွင် ပါဝင်သော အက်တမ် (atom) အားလုံး" စသည်တို့ဖြစ်သည်။ စာရင်းအင်းတွက်ချက်ရန် လုံလောက်သော နမူနာကျပန်းကောက်ခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက် (surveys) ယူမည်လော၊ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှု (experiments) လုပ်ကာ အချက်အလက်ထုတ်လုပ်မည်လား အစရှိသည့် အချက်အလက်မည်သို့ စုဆောင်းမည်ဟု စီစဉ်ခြင်း မှစ၍ အချက်အလက် (data)များကို ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ကိုင်တွယ်အသုံးပြု အဖြေရှာခြင်းများသည် စာရင်းအင်းသင်္ချာနယ်ပယ်အောက်တွင် ရှိသည်။
ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ပျံ့နှံ့မှုပုံစံ (normal distribution) (CLT သီအိုရမ်)ကြောင့် အလွန်ပင်အသုံးဝင်ပြီး အသုံးများသော ဖြစ်နိုင်ချေ သိပ်သည်းဆ တွက်ချက်မှု ဖန်ရှင်တစ်ခု)
အိုင်းရစ်ပန်းပင် မျိုးကွဲပြားမှု ပြပုံဇယား(၎င်းသည် ဖြန့်ကြဲမှတ်များ ဆက်စပ်ပုံဇယားများ(Scatter plots)ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ကို သရုပ်ဖေါ်စာရင်းအင်းသင်္ချာတွင် ကိန်းရှင်တို့၏ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှီးနွယ်ဆက်စပ်ပုံကို ဖေါ်ပြရာ၌ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။)
ယခုအခါ စာရင်းစုပညာသည် ခေတ်စားလျက်ရှိသည်။ ပမာ အားဖြင့် လူဦးရေ တိုးတက် ဆုတ်ယုတ်မှုကို သိရှိနိုင်ရန် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်လူထု တစ်မျိုးသားလုံး ၏ တစ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေသုံးငွေ စာရင်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လယ်များမှ ပျမ်းမျှတစ်ဧက စပါးအထွက်နှုန်းသိနိုင်ရန် စာရင်း များ စုဆောင်းခြင်း အစရှိသည့် စံနစ်များသည် စာရင်းစုပညာ နှင့် သက်ဆိုင်သည်။
၅ စာရင်းအင်းသင်္ချာ နည်းစနစ်များ
၅.၁ သရုပ်ဖေါ် စာရင်းအင်းသင်္ချာ
၅.၂ ကောက်ချက်ဆွဲ စာရင်းအင်းသင်္ချာ
စာရင်းအင်းပညာရပ်သည် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ အကျဉ်းချုံ့ခြင်း၊ တင်ပြခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်းပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသော သိပ္ပံနည်းကျသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သရုပ်ဖေါ် စာရင်းအင်းသင်္ချာ သို့မဟုတ် ဖော်ပြစာရင်းအင်းပညာ (Descriptive Statistics)သည် လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် နမူနာကျပန်းကောက်ခြင်း (sampling)မှ ရရှိသော အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းတို့အပေါ် တိုင်းတာပုံများ (measures)၏ အခြေခံအင်္ဂါရပ်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက် အဆိုပါ အင်္ဂါရပ်များကို ဆက်စပ်ပုံဇယားများအနေဖြင့် ဖေါ်ပြ၍ အရေအတွက်ဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (quantitative analysis)ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အချုပ်အားဖြင့် ဤနည်းစနစ်ကို သုံး၍ ရှုပ်ထွေးများပြားသော အချက်အလက်များမှ အကျဉ်းချုပ်ကိုထုတ်ယူကာ နားလည်နိုင်ရန် ကြိုးစားလေ့ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘတ်စကက်ဘော ကစားသမားတစ်ယောက်၏ ဂိုးသွင်းရာခိုင်နှုန်းသည် ၎င်းကစားသမား၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကျဉ်းချုပ်ပြသော သရုပ်ဖေါ် စာရင်းအင်းသင်္ချာဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူ၏ ဂိုးသွင်းရာခိုင်နှုန်းသည် ၃၃% ဟုဆိုလျှင်၊ သူ သုံးကြိမ်သွင်းလျှင် တစ်ကြိမ်ဝင်နိုင်သည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် မှတ်ယူနိုင်သည်။
ကောက်ချက်ဆွဲ စာရင်းအင်းသင်္ချာ သို့မဟုတ် ညွှန်ပြစာရင်းအင်းပညာ (Inferential Statistics) တွင်မူ လက်ရှိကောက်ယူထားသော နမူနာကျပန်းအုပ်စု (sample) အချက်အလက်များ၏ အင်္ဂါရပ်များမှတစ်ဆင့် အချက်အလက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (data analysis) ကို အသုံးပြု၍ အုပ်စုကြီးတစ်ခုလုံး (population) ၏ ဖြစ်နိုင်ချေ ပျံ့နှံ့မှုပုံစံ (probability distribution)ကို ကောက်ချက်ဆွဲယူရန် ကြိုးစားလေ့ရှိသည်။
↑ Oxford Reference။
↑ Romijn၊ Jan-Willem (2014)။ "Philosophy of statistics"။ Stanford Encyclopedia of Philosophy။
↑ Cambridge Dictionary။
↑ Dodge, Y. (2006) The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University Press. တမ်းပလိတ်:Isbn
↑ Origin of the statistics and probability။ 2019-12-30 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-09-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ပညာရေးသုတေသနပြုလုပ်နည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့၊ ပထမအကြိမ်၊ တက္ကသိုလ်များပုံနှိပ်တိုက်၊ ၂၀၀၁၊ ဇူလိုင်လ၊ ရန်ကုန်။ နှာ ၁၃၈။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Trochim၊ William M. K. (2006)။ Descriptive statistics။ Research Methods Knowledge Base။ 14 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စာရင်းအင်း_ပညာ&oldid=541760" မှ ရယူရန်
၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။